Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Mungaab) ayaa ugu baaqay Wasiirada dhowaan loo magacaabi doono xukuumada cusub inay degaan degmooyinka Gobolka Banaadir.
Mungaab ayaa sheegay in wasiirada iman doona laga rabo inay isku baahiyaan degmooyinka Magaalada Muqdisho oo aysan isku koobin kaliya nawaaxiga xarunta Madaxtooyada.
Guddoomiyaha ayaa xusay in Xukuumadda cusub ee la soo dhisi doono la rabo Wasiirada inay noqdaan kuwo geesiyaal ah oo ku dhiirada inay degaan degmooyinka Muqdisho.
“Waxaan kaa codsanaynaa Ra’iisul Wasaare inaad keentid Wasiiro Geesiyaal ah oo Magaalada gudaheeda soo dhex-dega Madaxweynahana aan ku cariirin xarunta Madaxtooyada ”ayuu yiri Mungaab
Isagoo ka hadlayay Xaflad soo dhaweyn ah oo xalay Ra’iisul Wasaaraha loogu sameeyay magaalada Muqdisho ayuu Mungaab ku muujiyey in Muqdisho ay tahay meel amaan ah.
Hadalka Mungaab ayaa ku soo aadaya xili wasiirada iyo madaxa dowlada intooda badan ay caadeysteen iney gabaadsadaan nawaaxiga madaxtooyada Somalia, kana baqaan degmooyinka Muqdisho, iyagoo ka baqaya weeraro kaga yimaada Al-shabaab.